I-K-Tek iveza i-KlassicPro Boom Poles - I-NAB Khombisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Isakazo se-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-K-Tek iveza i-KlassicPro Boom Poles
K-Tek, inkampani eyethula okokuqala eyenziwe-e-USA, i-graphite, i-telescoping pole eminyakeni engu-25 eyedlule, imemezela intuthuko enkulu emkhakheni wabo we-Klassic Boom Poles. Ukuze uhambisane nezidingo zomqhubi we-boom womsebenzi wanamuhla, i-KlassicPro entsha ihlanganisa izici ezinhle kunazo zonke zokuqala, kufaka phakathi: ukubhebheza kwe-graphite ephezulu kakhulu yokukhanya, ama-bases modular, ukusingathwa okusheshayo nokuvala okuthulile. Isakhiwe esitolo sokuqala e-Vista, eCalifornia, i-KlassicPro ngayinye yenziwa ngokunakekelwa okufanayo futhi kunakekelwa ngemininingwane njengeyokuqala.
Umklamo omusha unikeza ukushintshana okwenyukayo. Yilapho i-headpiece entsha ekhishwayo ka-K-Tek ingena khona. Awekho amapulazi afakiwe futhi asindiwe esikhathini esidlule. Isihloko sekhanda esicwenguliwe namuhla sithinta futhi siphume ithubhu kahle. Ikhebula lokuzikhethela lingasuswa noma lifakwe-ngaphandle kokuhlunga. I-poom pole ishintshwe kalula ku-un-cabled, ikhoyili yocingo, ikhiyiwe ngokuqondile noma nge-transmitter phezulu noma ngezansi. Akukho ukuguqulwa okwedlulele isikhathi futhi akusadingeki ukuthenga isimiso esisha ngokuphelele ukuze uhambisane nokushintsha kweklabhu.
Ikhanda lokukhishwa elikhishwayo lenza ukuthi ukuvuselelwa kabusha kwensimu kusebenze. Ukusekela lokhu, i-K-Tek idale ikhebula lekhwalithi yekhwalithi ephakeme equkethe umshini omusha wesiphakeli esisha, ohlangothini oluphansi. I-KlassicPro Cable entsha ihlanganisa i-wiring gauge wiring kanye ne-aluminium yokuvikela ukuyenza ibe namandla futhi avikeleke kakhulu kusuka ekuphazamiseni ama-radio frequency (RF). Isixhumi esisha se-KlassicPro Right Angle sincane, sibhebhe, sisebenza, futhi senziwe sithandwa I-Neutrik isixhumi njengesisekelo sayo. Ukusizwa okunamandla okunamandla okusha kwenza isixhumi se-Right Angle sibe namandla kakhulu ngenkathi sibambe ngokuphephile i-wiring endaweni. Njengenzuzo eyengeziwe, ukuma kokuxhumeka kungashintshwa ngokumane ususe izikrini ezimbili, uzijikeleze endaweni oyifunayo, futhi uzikhiphe endaweni. Lezi zithuthukisi zonke zengeze phezulu komthwalo wokufiphaza kakhulu ofisa ngaphezulu kwesipuli.
I-K-Tek iklanyelwe izigxobo ezinzima kakhulu futhi zibe nobude obuthuntshana obufushane obukhethwa emvelweni wokukhiqiza wanamuhla. I-KlassicPro igcina isisindo sokukhanya sokuqala samatayipi, kodwa izici ezintsha zokwakha zinezela amandla. Futhi, ukwengeza amashubhu wesithupha nesiphakamiso okwandisa ukwandisa ukuqina nokuthuthukisa ibhalansi yokusingatha. Umphumela uba ukupheka okusheshayo nokulawula okuningi komsebenzisi wemakrofoni.
Enye inzuzo entsha ishintsho kumakholeji avaliwe. I-coltti yendabuko yaseK-Tek yendabuko iye yaguqulwa ngobuso obukhulu kodwa obushelelezi obuvumela ukwandiswa okuncane okucashile kwesigaba ngasinye. Inqubo entsha yokugcotshwa ehlangene nokushintsha izimpande zangaphandle ezihlukanisa ama-oval kwenza kube ngcono nokuzizwa kahle lapho uvula futhi uvala ikhola ngayinye. Ukuphela phakathi kwama-tubes nakho kuye kwaguqulwa ngakho i-KlassicPro igxuma ngokuvulekile futhi ivaliwe.
Izinduku ezintsha ze-KlassicPro zishiswe ngezandla ukuze zisakaze umsindo wokuphatha. Bafika ekukhethweni kwezithombe ze-4-section eziyisithupha: 9 '(KP9), 12' (KP12), 16 '(KP16), ne-20' (KP20), ubude obude. Ikhebula lekhoyili kanye nekhamera yekhanda eliqondile lingathengwa ngokwehlukana noma kuphakethe le-boom pole ngaphambili. Ama-baseline e-XLR engezansi engezansi (KPCCR), Izigelekeqe ezihamba phambili (KPFT) nokuthandwa I-Side KickI-adapter ye-Transmitter (KPTA) iphinde ithuthukisiwe.
I-K-Tek KlassicPro Boom Poles itholakala kubathengisi abagunyaziwe be-K-Tek. Ukuze uthole olunye ulwazi lwe-imeyili [Email protected] Ukuvakashela www.ktekpro.com
Njengoba isungulwa ku-1996 nguManfred N Klemme, uK-Tek uye wasekela izwe elilalelwayo ngamathuluzi amasha okwenza umenzi womsindo kanye nemisebenzi yomqhubi we-boom elula. Ngomdlandla wokulalelwayo, umkhankaso wokuqala kaManfred kwakuwukuklama nokukhiqiza umugqa we-US owenziwe ngamapulangwe alula, aqinile futhi alalelwayo abantu abakwazisa. Imisebenzi efeziwe-ku-1999 K-Tek yathola i-Technical Achievement Award evela ku-Academy of Motion Picture Arts neSayensi ye-Klassic Boom Pole. Kusukela ngaleso sikhathi, uK-Tek uye wazuza ezinye imiklomelo eminingi kanye nedumela lokwakha ngokuklama futhi ekwakhiwe kahle, imikhiqizo ephakathi komsindo kufaka phakathi: i-Avalon graphite kanye ne-aluminium boom poles, ama-mounts ama-shock, i-Shark Antenna intaba ne-Fuzzy & Topper windscreens. Umzila we-Stingray okhulayo we-K-Tek uhlanganisa, izikhwama ze-Sound mixer, i-Waist Belt, i-back-saving Audio Harness, kanye nezikhwama zokufinyelela kanye nama-pocket. Vakashela: www.ktekpro.com.
I-K-Tek iveza i-KlassicPro Boom Poles - Julayi 9, i-2019
I-Cine Gear Yamemezela ama-Winners of Technical Achievement Awards - Julayi 8, i-2019
I-bebob Yengeza Ubuningi Bamashaja Asheshayo Ne-Adapter Ezingavamile Kwebhethri Ezincane I-Smallest and Most Complete Complete 14.4V Power Solutions - Juni 3, 2019
Ama-spears nama-Arrows Umlingisi wevidiyo	2019-07-09
Ngaphambilini: Yeka ukuvula ukulungiselelwa kwe-SMARTLIVE MULTI SPORT futhi ubonise izibuyekezo ze-Version Factory zokukhiqizwa kokuqukethwe nokusabalalisa ku-IBC 2019
Olandelayo: Abanikazi bezemidlalo abakhulu bamazwe omhlaba kanye nabahleli be-ASO babonisa isivumelwano seminyaka eminingi yokusebenzisa i-Globecast Digital Media Hub ngokuhlanganyela kokuqukethwe